प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाअभियोग किन र कसरी ! – HamroSamrachana
प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाअभियोग किन र कसरी !
हाम्रो संरचना । १८ बैशाख २०७४, सोमबार १०:२६
ठुला भ्रष्टाचारीहरुको चंगुलबाट राष्ट्र जोगाउने बिरुद्ध महाअभियोग
सर्वोच्च अदालतमा २२ जेठ ०६९ मा दायर भएको सुडान घोटाला प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा ढिलो गरी ७ असोज ०७० मा फैसलाका लागि अंग पुगेर पेसीमा चढ्यो । त्यसपछि पनि २ वर्ष २ महिनासम्म यो मुद्दामा कहिल्यै सुनुवाइ भएन ।
सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि आवश्यक एपीसी (आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर) लगायतका सामग्री खरिदमा २८ करोड ८१ लाख रुपियाँ बराबर भ्रष्टाचार दाबी रहेको यो मुद्दा कहिले न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएर त कहिले मुद्दाका पक्षहरूको अनुरोधमा स्थगित हुँदै आयो ।
२८ मंसिर ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्न खोजे तर टुंग्याउन नसकेरै निवृत्त भए । यही मुद्दा टुंग्याउने गरी २१ असार ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सुनुवाइ अगाडि बढाउन खोजिन् । त्यस दिन पनि मुद्दा स्थगित भयो । अनि, मुद्दाको पालो छिटोछिटो आउने बन्दोबस्त मिलाइन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीनपटक आफैँ रहेको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरेपछि अभियुक्तहरूलाई छटपटी भयो । त्यो छटपटी कानुन व्यवसायीहरूमार्फत इजलासमा पोखियो । उनीहरूका कानुन व्यवसायीले निकै जोड दिएर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटहरूको प्रसंग उठाए र ती रिटको टुंगो नलागेसम्म यो मुद्दाको फैसला हुन नसक्ने अड्डी कसे ।
कार्कीको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा साथ दिएका र असल छवि भएका न्यायाधीशलाई धम्काउन र थर्काउन विभिन्न हत्कण्डा अपनाइयो । त्यसैको एउटा कडी थियो, २१ भदौमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध संसद् सचिवालयमा तीन सांसदले महाभियोगको सूचना दर्ता गर्नु । यहाँ स्मरणीय के छ भने न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको सूचना दिने सांसद हरिचरण साह र उनकी छोरी पूर्वसभासद गायत्री साहविरुद्ध रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । विशेष अदालतबाट पूर्वसभासद साह भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेकी छन् भने पितालाई सफाइ दिएको छ । तर, केही अभियुक्तहरूले रातो पासपोर्टबापतको रकम सांसद साह अर्थात् तत्कालीन सभासद गायत्री साहका बुबालाई दिएको बयान अदालतसमक्ष दिएका छन् । यस आधारमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्न सक्ने सम्भावना छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “कुनै फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा न्यायपरिषद् वा सर्वोच्चमै निवेदन दिन सकिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन गरी महाभियोगको सूचना दिनु भनेको न्यायाधीश र सिंगो न्यायपालिकालाई तर्साउन खोज्नु हो । पार्टीका मान्छेले भनेबमोजिम फैसला नगरे ठीक हुँदैन भन्न खोजिएको हो ।” साप्ताहिक प्रकाशन नेपाल बाट
प्रहरीको गाडी दुर्घटना, १ को मृत्यु, ९ गम्भिर घाइते
निर्वाचनको दिन ४५ जिल्लामा सवारी साधनमा रोक
आज तमु ल्होसार..